नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा लागौं – News Portal
नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा लागौं
April 2, 2019 epradeshLeaveaComment on नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा लागौं
अहिले आगलागीको समय छ । जुनकुनै समयमा जहाँ पनि आगोको विपद् आउन सक्छ । यसमा सबै सजक हुन जरुरी छ । आगोको उच्च जोखिममा दाङ रहेको र त्यसका सबै नागरिकले पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने र आगलागी हुन नदिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने जिल्लाका सरोकारवालाले बताएका छन् । आगलागीका घटना बढिरहेका बेला हामीले प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा जिल्लामा आगलागीको नियन्त्रण र पूर्वतयारी के छ ? भनेर जिल्लाका सरोकारवालासँग सोधेको छौं ।
आगलागी नियन्त्रण पूर्वतयारी मजबुद
वन डिभिजन कार्यालय
देउखुरी, दाङ गर्मी समय शुरु भएसँगै आगलागीको जोखिम बढ्दै गएको छ । विगतको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा अधिकांश देउखुरीको वनक्षेत्र आगलागीको उच्च जोखिम मानिन्छ । गर्मी समयमा आगो लगाएर वन्यजन्तुको चोरी शिकारी गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ ।
वन क्षेत्रमा केही प्राकृतिक रुपमा आगलागी हुने गरे पनि अधिकांश आगलागी मानवीय त्रुटीकै कारण हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले हामीले मानवीय सचेतना दिन विभिन्न सञ्चार माध्यममा जनचेतनामूलक सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गरिरहेका छौँ ।
त्यतिमात्र नभई मानवीय बस्ती भएका वन क्षेत्रलाई विशेष निगरानीका साथ आगलागीले ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले आगलागी नियन्त्रण गर्ने पूर्वतयारीलाई समेत मजबुद बनाएका छौँ । देउखुरी क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई आगलागीको जोखिम, न्यूनीकरण, उद्धारलगायतका बारेमा विभिन्न तालिममार्फत चेतना फैलाउने प्रयास गरेका छौँ ।
देउखुरी क्षेत्रमा करिब १ सय १६ सामुदायिक वन रहेका छन् । वनमा आगलागी नियन्त्रणका लागि अग्नी नियन्त्रक रेखा बनाउने, उपभोक्तालाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छौँ । मुख्य राजमार्ग क्षेत्र भएकाले पनि देउखुरीको वनक्षेत्र आगलागीको उच्च जोखिम क्षेत्र मानिन्छ । त्यसैले हामीले राजमार्गक्षेत्रमा पनि विषेश सतर्कता अपनाउँदै अग्नी नियन्त्रक सामाग्रीसँगै स्थानीय प्रशासनलाई पनि आगो नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीलाई तिब्र बनाएका छौँ ।
वन समूहका उपभोक्ताले कहि कतै आगलागी भईहालेमा स्थानीय प्रशासन, वन डिभिजनलाई तत्कालै खबर गरिदिनका लागि अनुरोध समेत गरेका छौँ । किनभने हामीलाई कतिबेला आगलागी हुन्छ , पत्तै हुँदैन ? जसले देख्छ त्यसले तत्काल प्रहरी वा हामीलाई खबर गरिदिनुपर्छ । बिगतमा वनमा आगो लगाएर शिकार खेल्ने प्रचलन पनि निकै थियो तर अब बिस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
अब हामीले वनमा कसैले पनि आगो लगाएको थाहा पाउने वित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरेर वन ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएर कानुन अनुसार कारवाही गर्नेछौँ । वनमा आगलागीको जोखिम कम गर्न मानवीय सचेतनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा लगेका छौँ । सम्पूर्ण सामुदायिक वन समूहमा सचेतना दिने उद्देश्यले तालिम तथा सचेतना प्रभाकारी बनाउँदै लैजान थालेका छौँ ।
आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण प्रयास
कुनै समय दाङका वनहरुमा निकै आगलागी हुने गर्दथ्यो । यो गर्मी समयमा । जसका कारण वनहरुमा अमुल्य जडिबुटी, विभिन्न जीवजन्तुहरु जलेर नष्ट हुने गरेका थिए । मानिसहरु आगो लगाएपछि वनमा बोटबिरुवा राम्रो पालाउँछ भन्ने भ्रम थियो भने कतिपय अन्य कारण पनि वनमा आगलागी हुने गरेको थियो ।
वनको बीच जंगलबाट हिड्ने मानिसले चुरोट खाएर ननिभाएर ठुटो फालिदिने, वनमै आगो बाल्नेजस्ता कारण वनमा आगलागी हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समयम मानिसमा सचेतना बढ्दै गएका कारण आगलागी हुने क्रम कम हुँदै गएको छ । वनमा आगो लगाउनु हुँदैन् । वनमा बस्ने जीवजन्तु मात्र नभई विभिन्न प्रकारका जडिबुटीसमेत जलेर नष्ट हुन्छन् भन्ने सचेतना बढेका कारण वनमा आगलागी कम हुँदै गएको छ ।
वनमा आगलागी कम हुँदै गए पनि डिभिजन वन कार्यालयले आगलागी हुन सक्ने ठाउँको पहिचान, आगलागी भैहालेमा आगो नियन्त्रणमा जतिसक्दो छिटो कसरी ल्याउन सकिन्छ ? अझै मानविय क्षति हुन नदिने भन्ने रणनीति अपनाएर आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण प्रयासमा छौँ । आगलागीमा वन क्षेत्रको मानविय बस्ती बढी जोखिम हुने भएकाले केही गरी आगलागी भैहालेमा बस्तीलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ?
भनेर हामीले अग्नी नियन्त्रण गर्ने सामाग्रीको पूर्वतयारी, तत्कालै उद्धार गर्ने लगायतका कुरालाई ध्यान दिएका छौँ । त्यस्तै सचेतना नै ठूलो कुरा भएकाले हामीले वनका उपभोक्तालाई आगो नियन्त्रण, आगलागीको जोखिम, आगलागी भएमा कसलाई खबर गर्ने लगायतका विषयमा हामीले प्रशिक्षण दिने गरेका छौँ ।
त्यस्तै तत्काल आगो नियन्त्रणका स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयलाई पनि बढाएका छौँ । आगलागी भैसकेपछि त्यसबाट क्षति व्यहोर्नेभन्दा सकेसम्म हुनै नदिनका लागि के गरेर प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने विषयमा हामीले विभिन्न अन्य निकायसँगको सहकार्य पनि बढाउने प्रयासमा छौँ । विगतमा भएको घटनाबाट पाठ सिकेर सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
वनमा आगलागी कम हुँदै गए पनि डिभिजन वन कार्यालयले आगलागी हुन सक्ने ठाउँको पहिचान, आगलागी भैहालेमा आगो नियन्त्रणमा जतिसक्दो छिटो कसरी ल्याउन सकिन्छ ? अझै मानविय क्षति हुन नदिने भन्ने रणनीति अपनाएर आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण प्रयासमा छौँ ।
आगलागीको जोखिम क्षेत्र घोषणा
बवई गाउँपालिका, दाङ
हामीले बबई गाँउपालिकामा आगलागी हुन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगो नियन्त्रणका लागि सामाग्री तयारी गरेका छौँ भने आगलागीको जोखिमबारे जनचेतना फैलाउने प्रयास गरेका छौँ ।
बिगतमा आगलागी भएको क्षेत्रलाई बढी आधार मानेर आगलागीको बढी जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ५ र ७ आगलागीको बढी जोखिममा छन् ।
किनभने यी क्षेत्र भनेको वनजंगलसँग जोडिएको क्षेत्र हुन् भने ग्रामीण बस्ती भएका कारण अधिकांश घरमा फुसको छानो छन् । बढी जोखिममा भएका गाउँपालिकाका तीनवटा वडाभन्दा अन्य ठाउँ पनि केही घरहरु फुसले छाएका घर भएका कारण अन्य ठाउँमा पनि आगलागी हुन सक्ने भएकाले गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई सचेतना दिन सचेतनामूलक सामाग्री प्रचारप्रसारमा लागेका छौँ ।
फुसको छानो भएका घर, जंगलको बीचमा भएको बस्तीका कारण गर्मीसँगै आगलागीको जोखिम बढ्दै गएको हुनाले गाउँपालिकाले जनचेतनाको कुरालाई प्राथमिकता दिदै विभिन्न वन समूहका उपभोक्तालाई तालिम, आगलागी भैसकेमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति कम गर्न तत्काल आगो नियन्त्रण र उद्धारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आगलागी नियन्त्रण गर्ने स्वंयसेवकसँगै अन्य अग्नी नियन्त्रणका सामाग्री तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । हामीसँग अहिले दमकल त छैन् तर अन्य आगो नियन्त्रण गर्ने आगो नियन्त्रक सामाग्री बनाएर राखेका छौँ ।
बिगतमा जस्तो आगलागीको जोखिम केही कम भएको छ, फुसले छाएका छानो भएका बस्ती बिस्तारै कम हुँदै गएका छन् । हामीले पनि अब फुसको छानोमुक्त गाउँ बनाउने अभियानमा छौँ । जसले गर्दा आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ । अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि समयमा भएका आगलागी पीडितलाई तत्काल राहत, खाना तथा बस्न र करिब १० हजारसम्मको रकम दिने गरेका छौँ ।
स्थानीय सरकार गठन भएपश्चात् हामीले नागरिकलाई कुनै पनि समस्या हुन नदिने प्रयास गरेका छौँ । तर नागरिक पनि जागरुक हुनपर्छ । समस्या लुकाएर बस्नुभन्दा हामीलाई भन्नुभयो भने हामीले सकेसम्म समाधानका उपायमा लाग्ने छाँै र आगलागीको घटना न्यूनीकरणमा स्थानीयको निकै साथ रहनेछ भन्ने लाग्छ किनभने हामीलाई खबर नै भएन भने त कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर जतिसक्दो छिटो खबर गरिदिन म गाउँपालिकाबासी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
उद्धार र राहतमा निकै समस्या
दाङका दश स्थानीय तहमध्ये बंगलाचुली गाउँपालिका आगलागीको हिसाबले निकै जोखिम गाउँपालिका हो । अधिकांश बस्ती वन क्षेत्रसँग जोडिएको, बस्तीका घरहरु फुसले छाएको लगायतका कारण हाम्रो गाउँपालिका आगलागीको उच्च जोखिममा परेको छ ।
हामी स्थानीय सरकार आएपछि पनि थुप्रै आगलगीका घटना भए । अधिकांश भूभाग पहाडी संरचना भएका कारण आगो नियन्त्रणसँगै उद्धार र राहतमा निकै समस्या हुने गरेको छ ।
सबै बस्तीमा मोटर बाटो नपुगेका कारण कुनै समय आगलागी भईहालेमा राहतका सामाग्री पु¥याउन निकै कठिन हुने गरेको छ । हामीले गाँउपालिकामा भएका फुसले छाएका घरलाई जस्तापाता वितरण गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ ।
जसले गर्दा आगलागीको जोखिम केही भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा छौँ । आगलागी हुने नदिनका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्न विभिन्न अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ, गतवर्ष भन्दा अलि बढी आगलागीका घटनामा परी मानविय क्षति पनि भएकाले यो वर्ष उच्च सतर्कता अपनाएका छौँ ।
गर्मीसमय शुरु भएसँगै आगलागीको जोखिम बढेकाले मानविय सचेतनालाई प्राथमिकता दिएर सकेसम्म आगलागी हुनै नदिने योजनाका साथ लागेका छौँ ।
दुर्घटनालाई पूर्णरुपमा रोक्न त सकिँदैन् । तर केही भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने रणनीतिका साथ काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय, प्रहरी प्रशासन, वन उपभोक्ता समूहलगायतको साथले आगलागीबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सबैसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ । गाउँमा वा घरमा आगलागी हुने बित्तिकै तुरुन्त खबर पाउन सके आगलागीको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अझै सहज हुने थियो भन्ने लाग्छ ।
गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकारले नागरिकलाई आगलागीबाहेक अन्य विभिन्न घटनामा पनि सहयोग गर्नेछ मैले प्रतिवद्धता जनाउँदछु । सञ्चार माध्यम पनि जनताको साथी भएकाले आगलागीका अप्रिय घटना हुन नदिने सन्देशमूलक सामाग्री प्रशारण गरिरहेका छन् ।
यसले पनि के नागरिकलाई सुसूचित गराउने छ र आगलागीको जोखिम केही भए पनि कम हुनेछ । प्रत्येक नागरिक सचेत भए पनि समस्या न्यूनिकरण केही भए पनि सहयोग पुग्ने छ भन्ने लाग्दछ ।
आगलागीको जोखिमबारे हामीले समय–सयममा अभिमुखीकरण पनि गर्ने गरेका छौँ । जसले गर्दा नागरिकमा आगलागीबारे सचेतना बढेको छ । मानवीय त्रुटीले हुने आगलागी यसले पनि केही कम हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ ।
तर पनि विपत्ति कतिबेला हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन् । यदि आगलागी भईहालेमा पनि उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन उद्धारकर्ता, अग्नी नियन्त्रक लगायतका जनशक्ति हामी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । केही विकट बस्तीहरुमा असहज भए पनि सकेसम्म चाँडै आगो नियन्त्रण लिएर क्षतिलाई कम गर्ने प्रयासमा छौँ ।
उपभोक्तालाई सचेतना तालिम
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङ
दाङमा करिब ५ सय १९ सामुदायिक वन छन् । ति मध्ये बबई पारी, नेपालभारत सीमा क्षेत्रका वनक्षेत्र, चुरे क्षेत्रका वन क्षेत्र बढी आगलागीको उच्च जोखिममा छन् ।
हामीले ईलाका वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा आगलागीको जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर आगो नियन्त्रण गरी क्षति कम गर्ने भन्नेमा छौँ । जिल्लाका सबै सामुदायिक वन समूहका उपभोक्तालाई आगलागी नियन्त्रणबारे विभिन्न माध्यमबाट सचेतना फैलाउने प्रयास गरेका छौँ ।
अधिकांश आगलागीका घटना मानवीय त्रुटीका कारण हुने भएकाले हामीले मानविय सेचतनालाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ लागेका छौँ । जिल्लाको करिब ८० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र रहेका कारण पनि गर्मी समयमा आगलागीको जोखिम बढी हुन्छ ।
आगलागीबाट वनमा भएको विभिन्न जडिबुटीसँग नजिकै रहेको बस्ती बढी प्रभावित हुने हुन्छ । त्यसैले नजिकै रहेको बस्तीलाई पनि सचेतना दिने र आगलागीबाट क्षति कम गर्ने भन्ने नै प्रमुख उद्देश्य हो ।
आगलागी भैहालेमा के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने हतोत्साहित हुनुभन्दा पनि तुरुन्त प्रहरी वा हामीलाई खबर गर्नुभयो भने हामीले उद्धार गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले आगलागीको जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज बनाउनका लागि आगलागी भैहालेमा के गर्ने ?
हुनै नदिन के गर्ने ? लगायतका विषय समेटिएका सामाग्री रेडियो तथा पत्रपत्रिकामार्फत सन्देशमूलक सामाग्री प्रसारण गरेका छौँ । सामुदायिक वनक्षेत्रमा बिगतको जस्तो आगलागीमा केही कमि आएको छ । सचेतना बढ्दै गएका कारण वनमा आगलागी हुने क्रम बिस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
जिल्लाका दुई वन डिभिजन कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँगको सहकार्यमा आगलागीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण कम गर्नतिर लागेका छौँ । आगलागीको जोखिम क्षेत्रमा अग्नीरोधक सामाग्री, उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ।
दाङका विषेशगरी चुरेक्षेत्रमा पनि आगलागीको जोखिम बढी हुन्छ । ति ठाउँ नजिकै रहेका मानवीय बस्तीलाई सचेतना फैलाउन विभिन्न वन समूहका उपभोक्तालाई सचेतनाको तालिम दिएका छौँ ।
August 30, 2019 epradesh